Shabaab oo soo bandhigay waxa uu salka ku hayo Khilaafka kala dhexeeya Mukhtaar Rooboow. | Arrimaha Bulshada
Home News Xogwaran Shabaab oo soo bandhigay waxa uu salka ku hayo Khilaafka kala dhexeeya Mukhtaar Rooboow.
Shabaab oo soo bandhigay waxa uu salka ku hayo Khilaafka kala dhexeeya Mukhtaar Rooboow.
Tuesday, January 16, 2018 News , Xogwaran
Bulsha:- Afhayeenka Guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), ayaa markii uhoreysay ka hadlay isa soo dhiibitaanka Mukhtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur oo kamid ahaa Saraakiisha ugu sarsareysa Al-Shabaab.
Rooboow ayaa Dowladda Somaliya isku soo dhiibay 13-kii Augost Sanadii ina dhaaftay ee 2017, Isagoo iska dhiibay Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, Wuxuuna sanadihii danbe ku dhuumaaleysanayay Deegaanka Abal oo 18 km ujirta Xarunta Gobolka Bakool.
Cali dheer oo soo diray Fariin Maqal eheyd oo soconeysa 38 Daqiiqo iyo 56 ilbiriqsi ayuu kaga hadlay dagaalka ay ka wadaan Somaliya iyo waxa ay salka ku heyso Khilaafka Shabaab iyo Rooboow.
“Arrinta 1-aad: Waxaa la ogsoon yahay in waddanka ay aad ugu baahsanayeen hay’ado shisheeye oo ku gabyayay in ay yihiin samafal, kuwaas oo ku hayay dalka boob, iyo ragaadin dhaqaale, faafinayay Diintooda, anshax xumo, iyo cuduro.” Ayuu yiri Afhayeenka Al-shabaab.
Arinta 2-aad: Sheekh Cali ayaa arrinka labaad ee ay isku qabsadeen Roobow wuxuu ku sheegay in ay tahay mid uu Muqtaar ku doonayay in loo hogaansamo dalabaadka qaar ka mid ah dowladaha shisheeye islamarkaana wadada hadal lala galo Beesha Caalamka.
“Arinta 3-aad ee ay isku hayeen Mukhtaar iyo Shabaab ayaa ah mid caqadiya sida uu asaguba sheegtay taas oo ah mawqifka diiniga ah ee waajibka tahay in laga qaato waxa loogu yeero Beesha caalamka, kaas oo ay xarakadu ka qaadatay mawqifkii nabiyyullaahi ibraahiim CS.” Ayuu yiri Afhayeenka Shabaab.